pyut pyut: stick format ​ချ​တဲ့​အ​ကြောင်း​ကို​သီး​သန့်​ရေး​ပြ​ပေး​စေ​လို​ပါ​တယ်​အ​ကို
​ဒီ​မှာ ​ရေး​ပေး​ထား​ပြီး​သား​ပါ . ​မေး​သ​မျှ​ဟာ​တွေ​က ​ရေး​ထား​ပြီး​သား​တွေ​ချည်း​ပဲ ​နဲ​နဲ​လေး​ကြိုး​စား​ပြီး ​ရှာ​ဖတ်​ကြ​စေ​ချင်​တယ်​ဗျာ ..
saisai: Microsoft office 2010 key ​လေး​ကူ​ညီ​ပေး​လို့​ရ​မ​လား။ ​ကျွှန်​တော့ micorsoft ​က unlincined product ​ဖြစ်​နေ​တယ်။
Serial No. : FF0154DG8521W101 (or) FF543SF54101SFSF
pyiesonehmyu: ​အ​ကို window7​တင်​ရင် ​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ ram, vga, cpu ​ဘယ်​လောက်​ရှိ​ရင်​ရ​လဲ​ခင်​ဗျ
mycomputer ​ကို rightclick ​ထောက်​လိုက်​ပါ ..
mycomputer >> rightclick >> porperties ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​တာ​နဲ့ ​အဲ့​မယ် computer ​ဆို​တဲ့ ​ခေါင်း​စဉ်​အောက်​မှာ ​ရေး​ထား​တာ ​ငါ့​ညီ​လို​ချင်​တဲ့ ​ဟာ ​အ​ကုန်​ပါ​ပါ​တယ် . ​သေ​ချာ​ကြည့်​လိုက်​ပါ .
Ko Htet: ​အ​ကို​ရေ NIS 2010 trial resetter ​ထွက်​ပီ​လား​ခင်​ဗျ?
​ဒီ​မှာ ​ပေး​ထား​ပြီး​သာ​ပါ ... ​နဲ​နဲ​လေး ​ရှာ​ဖတ်​ပေး​ပါ​ဗျာ .. ​လူ​က​များ​တော့ ​လိုက်​လိုက် ​ရှာ​ပေး​နေ​ရ​တာ ​အ​လုပ်​တစ်​ခု​လို ​ဖြစ်​နေ​လို့​ပါ .. ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်
​ကို​သွေး : ​အစ်​ကို​ကျွန်​တော် ​မ​သိ​လို့​မေး​ရ​ဦး​မယ် folder option ​ပျောက်​သွား​ရင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​သင်​ပေး​ပါ​ဦး​ဗျာ
​ဒီ​မှာ ​ရေး​ထား​ပေး​ပြီး​သား​ပါ​ဗျာ . ​နဲ​နဲ​လေး​ရှာ​ဖတ်​ပေး​ပါ ..
kyaw zinlatt June 22, 2016 at 12:12 PM
Microsoft Access 2010 ​ဖြင့် Database program
​ရေး​ဆွဲ​သုံး​ပြု​နည်း စာအုပ် link မတက်တော့ပါဘူး Bro
Dr. Zeyar Toe August 8, 2016 at 12:36 PM
Hello Sayar, Please help me for MS Office 2010 Product keys.
ded branch February 19, 2017 at 10:24 AM
memory stick ပျက်နေတယ် format ချမရဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကို
ded branch February 19, 2017 at 10:27 AM
စတစ် format ချမရလို့ကူညီပါ